Manamboara lalana miaraka amin'i Google Earth | Martech Zone
Sabotsy, Martsa 17, 2007 Alatsinainy, Aogositra 24, 2009 Douglas Karr
The Làlan'ny kolontsaina Indianapolis dia ny Lovan'ny Gene & Marilyn Glick. Ny lalana Cultural dia bisikileta an-tanàn-dehibe sy mpandeha an-tongotra eran'izao tontolo izao izay mampifandray ny manodidina, Distrika ara-kolontsaina ary ireo fotoam-pialam-boly ary manompo amin'ny foiben'ny afovoan-tanindrazana Indiana. Tetikasa mahafinaritra izay manomboka miorim-paka eto an-toerana.
Raha niresaka tamin'i Pat Coyle aho dia nieritreritra fa mahafinaritra ny mametraka an-tsarintany ny Cultural Trail ary apetraka amin'ny Google Map mba hahafahan'ny olona mifandray. Google Earth (Azonao atao ny misintona azy maimaim-poana) na mijery azy amin'ny tranokala.
Mety hampitahotra ny fananganana lalana ho an'ny Google Map, saingy mora amin'ny Google Earth. Azonao atao ny mampiasa ny fitaovana Path
mamorona lalana. Kitiho ny fitaovan'ny lalana ary kitiho ny toerana hanombohana sy hiafaranao. Hisy tsipika hisarihana. Ny tsindry tsirairay avy aorian'izay dia hamokatra teboka afovoany. Mety ho karazana sarotra io (ctrl-click dia mamafa ny teboka iray), saingy afaka mamokatra lalana haingana amin'ny sari-tany ianao. Raha tsindrio havanana eo amin'ny takelakao eo amin'ny sisiny ianao dia afaka manampy famaritana, manova ny fijery sy ny fahatsapana ny sosonao, ary mametraka ny haavony mihitsy aza.
Miaraka amin'ny Google Earth, azonao atao ihany koa ny manongilana ny tontolo ary mamono sy mamono ny sosona iray taonina. Ny fitaovana ambony ankavanana dia mamela anao hanao zoom, hitongilana, hanova ny fomba fijerinao, hihodina ary hanova ny haavon'ny toerana avo. Ny fampiasana ny fampiharana dia tena intuitive!
Tamin'ny Desambra, Google Maps dia nanampy ny fanohanan'ny KML ny API azy ireo, amin'izay dia afaka mora foana ianao avoaho ho toy ny rakitra KML ny sosonao ary atorohy Google Map izany.
Ary koa, azonao atao ny manoratra sy mampakatra ny sosonao ho hitan'ny olona. Tsy mbola nanao an'izany aho fa ho avy tsy ho ela! Ny ampahany voalohany amin'ity tetikasa ity dia ny famoronana ny làlana. Fetsy tsara iray - nanokatra sarin'ny Cultural Trail aho ary nanafatra izany tany amin'ny Google Earth. Napetrako teo amin'ny mangarahara tokony ho 30 isan-jato izany ary nampiasaiko ho refy handrefesana ny lalana.
Ny ampahany manaraka amin'ity tetikasa ity dia ny fananganana sarintany ifandraisan'ny totozy amin'ny teboka sy ny popup sary. Cool zavatra!
Mar 19, 2007 ao amin'ny 1: PM PM
Tena teknolojia mahagaga izany. Tsy nanomboka nametraka topimaso amin'ny zanabolana amin'ny sari-tany ny Mapquest.
Manaova fandaharam-potoana fikarohana mba hahitana raha afaka mampiasa izany ao anatin'ny rafi-pitantanana fanao any ivelany isika. Tsara ny manana toro-lalana ho an'ny mpanjifa ho an'ny mpanolo-tsainay.
Mar 19, 2007 ao amin'ny 2: PM PM
Ny Directions dia endri-javatra vao haingana amin'ny Google Maps API ka azo ampiasaina hamoronana rakitra ivelany azo alaina amin'ny Google Earth. Ny fanatsarana ny lalana (2+ teboka) dia somary henjana kokoa. Misy mpivarotra sasany manao izany tsara Routesmart fa tsy nahita API na Software ho fampiharana serivisy aho.
Azoko antoka fa eo an-joron-trano any ho any izany! 🙂
Manaiky aho - mahagaga izany!
Mar 31, 2007 amin'ny 8: 16 AM
Doug, tena tsara izany. Misaotra ny fizarana! Tsy mbola nipetraka mihitsy aho hamantatra an'io zavatra io, fa toa tsy misy farany ny fahafaha-manao. Ny fampiasa iray hitako avy hatrany fa hamidy dia ny fampidirana ny sari-tany google miaraka amin'ny overlay mahazatra ao amin'ny tranokalan'ny mpanjifa.
Mar 31, 2007 amin'ny 8: 27 AM
Tena marina, Ian! Mbola mankafy ity sari-tany ity aho. Afaka manampy fikarohana aho, mametraka rafitra fanamarihan'ny tena manokana, manampy lalana, ary maro hafa. Zahao hoe Amboary ny adiresy ohatra hafa. Manantena aho fa hisy tranokala fanaovana sari-tany ifanakalozan-kevitra apetraka amin'ity herinandro ity.
BTW: Tranonkala mahafinaritra ary manantena ny hihaona aminao. Manana tambajotra matihanina izahay eto Indy izay miara-miasa aminay hanampiana mpanjifa marobe. Mety mila manampy anao izahay!
Mar 31, 2007 amin'ny 10: 52 AM
Tamin'ny alalan'i Ade namako no nahalalako anao. Mahafinaritra ny mihaona amin'ny hafa toa ahy.
Indray andro aho dia nanamarina ny GMap EZ, sora-baventy faran'izay tsotra mba hametrahana ny Google MAP API ao anaty pejin-tranonkala: http://www.n-vent.com/googlemaptest
Tena milay izany.
May 31, 2009 amin'ny 5: 52 AM
Indrisy anefa fa tsy misy endri-javatra ny Google Earth: rehefa mamorona lalana ianao dia tsy misy fomba mora handrefesana ny halavany.
Soa ihany fa voavahako io olana io! Raha tehirizinao ho rakitra .kmz ny lalana dia azonao ampidirina ao amin'ny tranokalako izany ary hilaza aminao ny halavan'ny lalana. Ity ny rohy:
Jun 4, 2009 ao amin'ny 4: 59 PM
Tsapako fa simba ny script nampidiriko, saingy namboariko. Nataoko koa izany mba hahafahanao mampiditra rakitra .kmz path na .kml path files. Noho izany, ity indray ny rohy hahitana ny halavan'ny lalanao Google Earth: